Wadaadadu waa fulayada fikirka – Kaasho Maanka
Boodhka Muxaadaro cinwaankeedu yahay “Safarka dhanka Aakhiro”
Wadaadka Soomaaligu ma laha fikir dhalad ah oo ku socda danta bulshadiisa ee waa wax uu ku matalayo wadaadka Carbeed. Waxba ma hindiso waxbana ma qoro wadaadku, iyada oo asal ahaan aqoonyahannimadu tahay in wax la qoro si waxaa loo barto, loo darso, loona dhiteeyo. Caalim kasta oo uu sheegto waa arday Carbeed oo weligii kilkisha ku sita buug uu qoray wadaad Carbeed oo isaga mar jaamacadda ka la baxay. Waxa sidaa ka dhigayaana waa han yari, habrasho iyo liidnimo uu naftiisa u hayo kol haddii aanu Carab ahayn.
Wadaadada Soomaliyeed waxay u arkaan dadka sida dad ay taariikhda iyo mustaqbalku u yihiin qaddar iyo nasiib iska yimaadda oo iska taga, ee aanay u ahayn natiijo ka dhalata fekerkooda iyo falkooda. Waa dad dunida u arka meel la isku soo jujuubay, sidaa darteed ka firxanaya oo sida ugu dhakhso badan u dhimanaya. Darka wadka laga cabbo ayaa lagu wada qamaamayaa oo loo baratamayaa. Dhul, dawlad iyo dan la wadaago kala sheegadkoodu iyo ku dagaallankoodu waa qaar ka mid ah marmarsiinyo badan oo lagu raadinayo dhimashada la caashaqay.
Bulsho sidaas ahi xaq uma leh in ay noloshooda adag canaantaan mar haddii wadaadku u matalayo laamaha kala duwan ee cilmiga.
Haddii aad taariikhda ka soo hesho wadaad dunida irbad ku soo kordhiyay, hoos fadhi oo wax ka baro. Haddii se aad ogaato in uu yahay faataale been ku nool, ka kac nacasnimada iyo waqti lumiska oo dantaada qabso.
Fulayada fikirku dal walba oo muslin ah waa ay ka buuxaan, xaggeennana waaba buuxdhaaf. Qaar badan oo ka mid ahi waa kuwa inoogu tugtug roon xagga aqoonta, fikirka iyo ereyga, inta kalena iyaga ayaa baalasha ku sita. Timaaddaduna ma soo qurux badna waayo faca imika kacay, weliba inta waxbaratay, badankoodu waxay ku jihaysan yihiin fulaynimada fikirka.